Iyo tvOS 10.1 uye watchOS 3.1.1 betas dzakaburitswawo | Ndinobva mac
Nhasi isu tatova nezvose beta shanduro dzevhiki rino patafura. Kutanga yaive iyo iOS vhezheni, ipapo iyo macOS Sierra 10.12.2 beta 3 y ikozvino tvOS 10.1 uye watchOS 3.1.1. Mune idzi nyowani beta vhezheni, zvikanganiso zvinogadziriswa uye mashandiro eshanduro anovandudzwa, saka zvinoita sekunge paine zvakawanda pamusoro penyaya dzinogona kukosha kana nongedzo. Iwo matsva beta beta anosvika vhiki imwe chete mushure mekutanga kweakambopfuura uye zvinotarisirwa kuti mumaawa mashoma anotevera kana kunonoka mukati memazuva mashoma, vhezheni yeruzhinji beta ichaburitswa kune vese vashandisi vakanyoreswa mu yeruzhinji beta chirongwa cheManzana.
Sezvatakataura mu beta yevagadziri veMac, idzi shanduro nyowani ndedzevagadziri saka hatikurudzire kuisirwa kunze kwekunge tave neakaundi account, uye munguva pfupi tichava neruzhinji vhezheni uye kunyangwe zvirinani kuramba tiri munzira kuitira kana paine kusawirirana kunonetsa nemaapplication edu kana maturusi. kukwanisa kuzviisa munguva pfupi.
Vakomana vanobva kuCupertino vanoenderera mberi nekuvhura mabheji avo ezvikwata uye nekuvandudza software yezvinogona kuita bugs kana zvikanganiso yakashumwa nevagadziri nevashandisi vakabatanidzwa muchirongwa cheveruzhinji beta. Kana pasina dambudziko rakakomba rikaonekwa mushanduro nyowani dzakaburitswa nhasi (mune dzapfuura hatina kuona zvikwata zvakakomba) zvirokwazvo mabheji matsva eruzhinji achawanikwa munguva pfupi iri kutevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Iyo tvOS 10.1 uye watchOS 3.1.1 betas dzakaburitswawo
Isu tatova nemaonero ekutanga eMacBook Pro neTouch Bar
Zvitatu zvinonakidza zvinotyaira zvine USB-C chinongedzo